Overgewicht Somalisch - Voorlichting Vertaald
Home Diëtist Overgewicht Overgewicht Somalisch
Waa maxay cayil?
Ahanshada qof buran ama cayilan waxu dhaca marka enerjiga u qofku qaato dhanka cuntada iyo cabida u kabadanyahay inta u jirka u gubo waqti badan.cayilka ama burnanta waxay ku xirantahay kaydka baruur badan hal waqti,taaso sababi karta cafimadka..
Siduu cayila ukaca?
Waxa jira arimo yar waxyaalo kordhin kara badashada cayilka adkayna kara dhimada barurta .waxa jira deegano cayilka sababa,iyo sababo shakhsi ah iyo saamayn dhanka dhaxal ah.
Marka ay meelkasta yaalan cunto energy badan leh,waxaa badna in si sahlan aad ku cunto kuna cabto.mida kale baahida almiitada way yartahay.madaama ay meelkasta laga helayo gaadiid.
Waxa sababa cayilka
Qofkasta si sababo u khaas ah ayuu ucayilaa ,sida cunida iyo cabida cunto badan aan cafimad lahayn .
Cunida wax fara badan .
Cunida cunto badan o enerji badan leh.
badsashada cuntooyinka fudud
Cabida cabitaano sonkor badan sida cabbitanada fudud iyo casiirka.
Cabida khamriga.cabitanada khamriga leh waxay ka kooban yihiin kalori badan.o sababi kara cayilnaan.
Cunida adoo mashquulsan sida adoo tv daawanaya waxay sababi kartaa inaad wax badan cunto in kabadan inta u jirka ayu u bahanyahay..
Jimicsi yar Iyo isborti la aan sababteedu tahay inaad xanunsantahay ama dhaawac tahay Ama waqti la aan.
Badalka qaab nololeedka ay sababteedu tahay isla noolashaha.heesashada caruur ,shaqo la aan shaqa la aan ama shaqo u qofku ka fariistay.
Joojinta cabida sigaarka caafimaadkaga ayay u ficanthay ,waxa kale o lagula talinaya inad iska jarto baruurta mark aaad sigaarka iska joojiso .waxa kugu cawin kara dhakhtar hadii lo baahdo.
Uurka kadib waxa adkaan karta inad ku laabato miisankii aad ahayd uurka ka hor,khaas ahaan hadii aad cayishay in kabadan intii laguugu talagalay.
Waxa jira dawooyinka qaar oo sababi kara inaad cayisho.
Dhibaato maskaxeed sida inad lakulanto wax aanad filayn iyo naxdin raad kugu reebtay,waxay sababi kartaa inaad damacdo cunid badan.sido kale waxa jira wax kadhexeya niyadjabka calamadahoda iyo cayilka.
cayilka dhaxalka u sababo
Weight is partly determined by a predisposition in the family. People with a predisposition to obesity gain weight more easily if they eat a lot and take little exercise. It may also be more difficult for them to lose the weight.
samaynta ay ka leyahay istreska iyo cayilka hurdada
Hurdo la aanta waxa laga yaaba inay laxirirto cayilka waxyarba ha ahaato ama wax badan hurdada waxay saamaysa enerjigaga iyo miisaanka.istres waqti dheer ah waxu la xiriri karaa cayilka kaas o sababa baruurta oo jirka ku badata caloosha,cuntada qaadashadeda oo aad badasho istres dartii waxay sababaysa in u wax qabadkaagu yaraado,cayilnaantu waxay sababan istres jireed iyo mid maskaxeed.
Goormee ayaa tahay qof cayilan ama obese ah?
BMI waa cabire lagu cabiro miisanka iyado lala xiirinayo dhirirka.BMI ga waxa loo xisabiyaa iyadoo loo qaybinayo miisanka aa tahay kg ahaan iyo dhirirkaga o mitir ah . BMI waa 80/(1.70x1.70) = 27.7.
: intaas wixii dhaafsan waa cayil
Caruurta 2-18: cayilka caruurtu uu ka duwanyahay kuwa dadka waa wayn.caruurtu wali waxa usocda dhirir,iyo hilib,BMI ga waxa uu ku xiranyahay da’a. National cut-off values for boys and girls Waxay soo saareen da’a da 2 ilaa 18 .dadka ka wayn 19 ilaa 70 sano.cayilkoodu waxaa lo qaybiyaa BMI ga 25-29,9 obeesna waxa ah BMI 30 ama inta ka badan.waxa jira kuwa laga reebay .
Adults, 19 to 70 years: overweight is defined as a BMI of 25-29.9 and obese as a BMI of 30 or higher. There are some exceptions:
Dadka aasiya kasoo jeeda asal ahaan (Woqooyiga aasiya indunusiya china japan) waxay leeyihiin barur badan o BMI ga la mid ah . Waxa kale o sidaas ah dadka kasoo jeeda Suriname iyo Antilles o leh asal asiyan ah.sidaa darteed BMI 25 ayaa iyaga cayil u ah 27.5 na waa obees.
BMI waxa u u muuqdaa mid aan lagu tiirsanan karin hadii aad yartahay ama dheertahay.
BMI ga laguma tiirsanan karo mark aaad uur leedahay ama aad nuujinayso.not a Elderly people aged 70 and above: a BMI of more than 28 means overweight.
dhaxda goobadeedu waxay muhiib u tahay cadaynta ina tahay khatarta caafimaded
Qasaarada BMI waa iyada oo aan xisaabta lagu darin qaybinta dufanka ee jirka. Sidaa darteed, wareegga dhexda waa cabbir dheeraad ah oo muhiim ah si loo qiimeeyo khatarta caafimaadka. Marka lagu daro BMI-da, wareegga dhexda ayaa sidoo kale loo isticmaalaa cabbirka qaybinta baruurta. Dufanka caloosha iyo agagaarkeeda ayaa caafimaadka wax u dhimaya. Miyey kaa culus tahay laakiin aad leedahay wareeg dhexda oo caafimaad qaba? Ka dib waxaan kugula talineynaa inaad ballan la sameyso dhakhtarka si aad u hubiso khatarta cudurka, kaliya si loo hubiyo.
Dhexda ragga wareega dhexda dumarka . Goobta udhaxeesa 94 iyo 102 cm Goobta udhaxeesa 80 iyo 88 cm
Saaid usareeya Goobta ka weyn 102 cm Goobta la weyn 88 cm
dadka wawayn e 70jirka iyo inta kadan iyo asalka
Carruurta, wareegga dhexda waxaa loo isticmaalaa oo kaliya si loo qiimeeyo saameynta daawaynta kasta. Dadka qaangaarka ah ee da'doodu tahay 70 sano iyo ka weyn, waxaa jira caddayn ah in dhibcaha goynta caadiga ah ee wareegga dhexda ay aad u hooseeyaan oo ay tahay in si taxadar leh loo fasiro. Ma jiro heshiis ku filan oo ku saabsan qodobbada goynta gaarka ah ee waayeelka. Si la mid ah BMI, waxaa jira cadaymo muujinaya dhibcaha goynta hoose ee dadka ka soo jeeda Koonfurta Aasiya, Shiinaha iyo Jabbaan. Dadkaas wareegga dhexda oo ka badan 90 cm ragga ayaa loo arkaa mid aad u sarreeya, dumarka waxay ka sarreeyaan 80 cm.
maxay tahay dhibaatoyinka cafimaad ee cayilka ?
Miisaanka badan wuxuu kordhiyaa halista xaaladaha sida:
• Nooca 2aad ee sonkorowga
Dhiig karka iyo cudurrada wadnaha iyo xididdada dhiigga .
dheef-shiid kiimikaad. noocyada kala duwan ee kansarka.
Caabuqa wadajirka iyo xirashada.
Xanuun ka caadada. Dhibaatooyinka dhalmada.
Dhibaatooyinka neefsi ah.
Dadka waayeelka ah.
Waxay ubadan tahay inay horseeddo dhaqdhaqaaqa hoos u dhaca iyo xaddidnaanta shaqada maalinlaha ah
Dadka miisaankoodu sarreeyo waxay leeyihiin khataro caafimaad oo ka badan kuwa miisaanka caafimaadka qaba. Markasta oo ay cayilku ka sii daran tahay, waa in ka sii badan oo ay ka sii daran yihiin dhibaatooyinka caafimaad. Dadka leh dufan badan oo caloosha ku jira waxay leeyihiin khatar caafimaad oo dheeraad ah. Waxa kale oo jira calaamado muujinaya in mar kasta oo miisaankaagu dheeraado, ay kor u kacayso khatartaada, tusaale ahaan, cudurrada wadnaha iyo xididdada dhiigga iyo nooca 2 ee sonkorowga.
Sidee iskaga ilaalin kartaa cayilka?
Cunto caafimaad leh iyo jimicsi ku filan ayaa door muhiim ah ka ciyaara ka hortagga cayilka iyo ilaalinta miisaanka caafimaadka leh. Dadka miisaankoodu hoos u dhacay ee doonaya inay sii wataan miisaankooda, waxa lagula talinayaa inay qaataan ugu yaraan 60 daqiiqo oo jimicsi dhexdhexaad ah ama xoog leh maalintii. Qofka miisaankiisu hoos u dhacay waa inuu helaa dheellitir cusub oo miisaankiisu xasiloon yahay oo uu sameeyo jimicsi dheeraad ah. Taasina inta noloshaada ka hadhay.
(BMI 25-29.9) Miisaanka xad dhaafka ah (BMI 25-29.9) iyada oo aan lahayn dhibaatooyin caafimaad oo dheeraad ahDadka qaangaarka ah ee da'doodu u dhaxayso 19-69 ee miisaankoodu dhexdhexaad yahay iyada oo aan lahayn dhibaatooyin caafimaad oo dheeraad ah
(sida dhiig-karka, kolestaroolka sare ama (kahor) sonkorowga) waxay isku dayi karaan inay is-miisaamaan oo ay ilaaliyaan miisaanka hoose ee la gaaro. Khatarta caafimaad ee buurnida xad dhaafka ah waxa lagu yarayn karaa in la lumiyo 5 ilaa 10% miisaanka. Saldhigga miisaanka caafimaadka leh waa in la cuno cunto yar si caafimaad leh oo ay weheliso jimicsi badan. Haddii ay taasi shaqayn waydo, ama haddii ay dhacdo soo noqosho, waxaanu kugula talinaynaa inaad kala tashato GP-gaaga habka ugu fiican.
Isticmaalka daawadu had iyo jeer waa in lala tashado dhaqtarka ku hawlan daaweynta waxaana loogu talagalay in lagu taageero daaweynta. Qalliinku waa tallaabada ugu dambeysa ee daaweynta buurnaanta. Kahor inta aan qaliinka dhicin, baaritaan faahfaahsan oo ku saabsan u qalmida bukaanka ayaa la sameeyaa
Miisaan culus (BMI 25-29.9) oo leh dhibaatooyin caafimaad oo dheeraad ah iyo cayil (BMI ≥30)
Dadka qaangaarka ah ee da'doodu u dhaxayso 19 iyo 69 ee miisaankoodu sarreeyo oo ay weheliso wareegga dhexda oo kordhay, kolestaroolka sarreeya, dhiig karka, (kahor) sonkorowga, cudurrada wadnaha iyo xididada, apnea hurdada iyo / ama cudurka kala-goysyada waxaa lagula talinayaa in aysan is-miisaamin laakiin la tasho dhakhtarkooda. Isla sidaas oo kale ayaa khuseeysa dadka buurnaanta leh (BMI ≥30), iyadoon loo eegin haddii ay jiraan dhibaatooyin caafimaad oo dheeraad ah iyo in kale. Marka lala tashado GP-ga, sababaha suurtogalka ah waa la baaraa waxaana la isla meel dhigaa tillaabooyinka daba-galka ah.Medication and surgery
Miisaanka xad dhaafka ah ee carruurta 2-18 sano
Marka ilmuhu cayilan yahay ama buuran yahay, waxaa muhiim ah in aanad adigu bilaabin in miisaankaaga hoos u dhaco. Ka dib oo dhan, carruurtu way koraan oo korayaan, taas oo u baahan tamar iyo nafaqo ku filan. Daawaynta carruurta cayilan waa in mar walba ay fuliyaan dhakhtarka qoyska, rugta daryeelka caafimaadka carruurta ama dhakhtarka dugsiga oo u gudbin kara ilmaha caawimo sax ah.
Cayilka dadka da'da ah ee 70 sano iyo ka weyn
Dadka da'da ah ee da'doodu tahay 70 sano iyo ka weyn waxaa kaliya oo lagula talinayaa inay lumiyaan miisaankooda haddii ay leeyihiin BMI 30 ama ka badan iyo haddii miisaanku hoos u dhaco wuxuu kaa caawin karaa inuu yareeyo dhibaatooyinka caafimaadka. Ka dib oo dhan, miisaan lumis waxay la socotaa luminta cufnaanta murqaha. Iyadoo luminta cufnaanta murqaha, xoogga muruqa ayaa sidoo kale lumaya. Tani waxay ka dhigi kartaa dhaqdhaqaaqa mid aad u adag waxayna kordhisaa khatarta dhicitaanka. Waa muhiim in dadka da'doodu tahay 70 sano iyo ka weyn ay raadiyaan hagitaan sax ah GPgooda si ay u lumiyaan miisaankooda. GP-gu waxa uu qiimayn karaa in miisaan dhimista ay macquul tahay oo uu u gudbin karaa bixiyaha daryeelka saxda ah.